Niadian-kevitra be tetsy Analakely io lohahevitra io omaly noho izao fandraisana ny frankofonia eto amintsika izao. Fa maninona tokoa moa no isan’ny teny fototra tao anatin’izany ny hoe “ara-politika sy ara-kolontsaina”? toy ny midika izany fa samy resy lahatra ireo nandray anjara fa ireo lafin-javatra roa ireo no zava-dehibe voalohany mampiodina ny raharaham-pirenena iray na dia ny lafiny toekarena aza no tena novoizina hatramin’izay. Tsy andeha araka ny tokony ho izy ny lafiny toekarena rehefa goragora ny politika satria izay no maha fitantanam-panjakana azy. Hirefarefa koa nefa izany rehefa mirefarefa ny kolontsaina satria io no hisarihana voalohany ireo mpizahantany sy rehefa vahiny ahitany ny maha izy azy antsika. Zava-mitranga hatramin’ny fahagola ary vao maika hita mirongatra hatramin’izao io famotehana ny kolontsaim-pirenena io ary dia zary toa resy lahatra mihitsy ny minisitera misahana azy ity tsy hampiharihary mazava ilay politikan’ny kolontsaina izay nodradradradrain’ireo mpanakanto ho aseho hatry ny ela. Isan’ny kolontsaina goavana maha firenena ny firenena ny teny ka dia anjarantsika tsirairay avy ny mamaly ny fanontaniana nipetraka teo manoloana ny fampiasantsika ny tenim-pirenentsika ankehitriny.